2011-08-22 @ 21:42 in Ankapobeny
Ela ny ela ka nahatratra 1000 ny lahatsoratro manokana. Tahaka ny tsy nampino ihany fa efa fotoana ela dia ela tokoa izy no nilona tao amin'ny 950 mahery tao. Ny somary nampihisatra azy angamba dia lasa ny fanitsiana ny lahatsoratry ny hafa iandreketako no betsaka kokoa noho ny lahatsoratra navoakako manokana.
Aza taitra fa tsy ny Eto amin'ny maharesaka VETO izany resahiko izany fa ny lahatsoratra nadika avy amin'ny teny hafa (anglisy indrindra indrindra) mankamin'ny teny malagasy. Hananika ny fahaefa-taona amin'ny volana ambony io ny nandikako lahatsoratra izay lavalava ny ankamaroany fa tsy hoe nanenjika isa befahatany vao nahatratra ny 1000 ny vitan'ny tena. Tamin'ny 11 septambra 2007 tokoa aho no nanomboka nandika lahatsoratra ho amin'ny teny Malagasy tao amin'ny Global Voices Online. Azo lazaina fa tsy mora ny nanaovana izany. Mampihomehy ny mieritreritra ilay izy fa tsapako fa vao maika niha-nihena ny fahaizako teny anglisy kely tao amiko tao. Toa heveriko fa izaho nandika tamin'ny voalohany no nahay kokoa noho ny amin'izao fotoana izao. Mahatsapa manko aho fa mihavery avokoa ny voambolana malagasy sy anglisy norantovina fony mpianatra.
Na dia niezaka ny hamelo-maso mandrakariva ny bolongana aza izahay ao mba tsy ho mena-mitaha amin'ireo teny manandanja hafa dia tsapa ihany ny fahasarotan'ny teny indrindra ka somary mirona amin'ny teknolojia vaovao sy ny fitaovana maoderina no resahina. Na dia ny samy mpampiasa teny malagasy aza manko dia mifanipaka amin'izay tokony ho dikanteny mety. Ny Software dia ny manampahaizana zatra ny serasera namana milaza azy ho rindrankajy, ny mpandala ny teny malagasy hafa sady efa filohan'ny fikambanana mpandala izany teny malagasy izany kosa nametraka ny ho rindrambaiko. Ny teny azo nifanarahana hatreo izany dia ny hoe rindra. Santionan'ny fahasarotan'ny fandikanteny avokoa izany rehetra izany ary efa niainana.
Indraindray ny tena dia mafiloha satria mila kiry ihany ny fitazonana teny iray. Nefa maniry indrindra ny fiarahan'ny rehetra miasa sy manabe voho ny teny malagasy an-tserasera (entiko ilazana ny teny anglisy hoe Online na ny teny frantsay hoe En ligne). Miangavy ny tsirairay, indrindra ireo mahay fiteny anglisy, hanitsy na hilaza eo amin'ny sehatra famoahan-kevitry ny lahatsoratra tsirairay izay dika tokony hohatsaraina. Mazava loatra fa tsy maintsy mamaky lahatsoratra roa na telo haintsika isika dia manolo-kevitra. Lany ny fotoana sy ny ron-doha fa mbola misy ny teny tsy hay avadika hatramin'izao ary maro no teny tsotra aza. Ohatra: ny Gender-Genre, tsy maintsy hoe karazana ve no ilazana azy? Eo ihany kosa ny hoe Data-Base de donnée, mety hatrany ve raha teny iditra no ilazana azy? Tsy hay intsony izay andikana ny Indigene: Indizeny ve sa vazimba? Faramparany teo ny namana iray nahita ny hoe zanatany izay mety hifangaro amin'ny colonie... Dia zavatra tahaka izany hatrany no niainana nefa tsy natao hahakivy loatra na ny lahatsoratra iray manontolo ihany koa no nadaboka.
Marihina fa ny tena dia tsy manampahaizana momba ny teny anglisy sy ny teny malagasy fa mba nitozo tamin'ilay izy fotsiny. Farany, mandrisika ny rehetra hitafa, hanitsy ao amin'io Global Voices amin'ny teny malagasy io ary hampiely ny fisiany amin'ny namana sy ny olom-pantatra rehetra. Mbola mitohy ihany koa ny fiarahantsika eto hatramin'izao ka!
Jentilisa 22 aogositra 2011